सोनिकासँगको यस्तो भिडियो बाहिर आएपछि के भन्छन् पारस शाह ? – Bishal4You
सोनिकासँगको यस्तो भिडियो बाहिर आएपछि के भन्छन् पारस शाह ?
Bishal4You २९ आश्विन २०७६, बुधबार १८:३९
काठमाडौं । पछिल्लो समय चर्चामा रहेका पुर्व युवराजा पारस शाहले आफु राजा नभएको बताएका छन् । मोडल तथा युट्युबर सोनिका रोकायासँगको हिमचिमका कारण चर्चाका आएका शाहले आफू राजा हुने मानिस नभएको बताएका हुन् । पारसले हरेक काम गर्न आफू स्वतन्त्र भएको खुलासा गरेका छन् । रोकायासँग हिमचिम बढेको र उनलाई लिएर मोटरसाइकलमा हुँइकिएको भिडियो बाहिर आएपछि म राजा हुँ र मोटरसाइकलमा हिँड्दा लाज मान्नुपर्ने ? भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।
आफू राजा हुनका लागि नजन्मिएको र राजसी ठाँटको मान्छे नभएको उनले खुलाएका छन् । आफु मोटरसाइकलमा हिँड्दा स्वतन्त्र हुने भएको हुँदा गाडीको भन्दा यसमा यात्रा गर्ने गरेको उनले जानकारी दिए । उनले भिडियोमा पनि आफु राजावादी नभएको भन्दै बोलेको सुन्न सकिन्छ । उनले आफु सबैभन्दा पहिले नेपाली भएको भन्दै सबैलाई नेपाली बन्न अनुरोध गरेको आषय भाइरल भइरहेको छ ।
पारसले आफू निर्मल निवासमा नभई छुट्टै अपार्टमेन्टमा बसिरहेको खुलाए । आफुसँग धन सम्पत्तिको नाममा एउटा मोटरसाइकल, गाडी र अपार्टमेन्ट मात्र रहेको उनले दावा गरेका छन् । पारसले आफूलाई सत्तामा जाने, शक्ति हासिल गर्ने र राजा हुने रहर नभएको स्पष्ट पारेका छन् । उनी भन्छन्, ‘जसले जे सुकै भनोस्, म खुला मान्छे हुँ र त्यही चाहन्छु । लुकाउन के जरुरी छ र ?’ पारसले अहिले आफू अध्ययनमा व्यस्त रहेको बताए । पूर्वीय दर्शनको अध्ययनमा आफू लागेको पारसको भनाइ छ ।